Iipropathi zemihla | Ukutya kukaNutri
Imihla ivela imihla yesundu kwaye sinokuzifumana ngaphezulu kweminyaka engamawaka amathandathu eyadlulayo. Ukulinywa kwayo kwaqala kuMazantsi mpuma eAsia nakuMntla weAfrika, ekugqibeleni kwasasazeka kumazwe afudumeleyo.
Iziqhamo zesundu zinazo iipropathi ezininzi ezingaziwa ngabantu abaninziKe ngoko, siza apha ukuza kukuxelela ukuba ziziphi izibonelelo zazo kwaye zinokukwenzela ntoni.
El Umhla njengesiqhamo umile okweqandaImdaka ngombala, inyama yayo iqinile kwaye imnandi kwaye ngaphakathi sifumana ithambo eloluliweyo. Singafumana iisampulu ukuya kuthi ga kwiisentimitha ezi-4 ubude. Njengoko besesitshilo, ukulinywa kwayo kugxile kwiindawo zoMbindi Mpuma, kuMntla Afrika nakwezinye iindawo zaseCalifornia. Nangona okwangoku, sinokuzifumana kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi.
Zisoloko zibandakanywa kwiqela lamandongomane, ziphathwa ngokufana neerasentyisi okanye iiapilkosi ezomisiweyo, nangona kunjalo, imihla iyakhula kwaye ivuthwe kwisityalo uqobo.
Njengokuba usazi, akukho luhlobo lunye lomhlaIya kuhlala ixhomekeka kuhlobo lomthi wesundu. Kuthiwa elona qondo libalaseleyo lemihla lifumaneka kwindawo ye Thunishiya, zinezikhumba ezigudileyo kakhulu, ezintle nezimnyama. Kwelinye icala, Imihla yaseturkey Ziyaziwa kakhulu, zinombala omnyama kwaye zithambile. Okokugqibela, sifumana imihla, ukusuka Elche ezikumgangatho ophezulu.
1 Uyisebenzisa njani imihla
2 Iipropathi kunye nezibonelelo zemihla
3 Iingcebiso ngokujongana nemihla
Uyisebenzisa njani imihla
Kulo Cuisine yaseMeditera Zisetyenziswa ngokubanzi, kwaye zinokusetyenziswa kuzo zombini iidessert, njengokutya okuphambili okanye naluphi na uhlobo lwesitya.
Nje ukuba ithambo lisuswe, singazigcwalisa ngeziqhamo ezomisiweyo okanye ngencindi yetshizi.
En IGrisi neTurkey, Bayilungiselela kunye nenyama nentlanzi.
Singafumana usuku lweviniga, ingenziwa chutney, ngohlobo lwepasta kunye nembewu yemveliso yokubhaka.
Asimele silibale ukuba izihlahla zomthi, kumthi wesundu sifumana iintliziyo zesundu, ezisetyenziswa kwiisaladi.
Iipropathi kunye nezibonelelo zemihla
Imihla isinika iipropathi zokutya okunesondlo esithathwa ngumzimba wethu emini. Imihla ibonakaliswa ngokusinika amandla amaninzi kunye nokuphucula imeko yethu.
Okulandelayo sikuxelela ukuba zeziphi ezona zibonelelo zibalaseleyo esizifumana kwimihla.
Kuyacetyiswa ukuba utye imihla kwi ixesha lokufunda okanye xa kufuneka inani elongezelelekileyo lamandla.
Bonyusa amandla engqondo kunye nokuqina.
Kukutya okunotye ii-amino acid.
Yilwa ngoluhlobo radicals simahla.
Banikezela ngehydrate ye ikhabhoni, ipotassium, ifosforasi, ikhalsiyam y manganesiyam.
Iqukethe iasidi pantothenic, Kuyimfuneko ukuguqula amafutha kwiicarbohydrate kunye namandla.
Umhla usinceda ukuba senze kwimidlalo esiyithandayo. Kuyinto ehamba phambili yokwenza ubunzima bemisipha.
Yilwa i uxinzelelo la uxhalaba kwaye isinceda silale.
Sithintele ekubeni iziqendu zoxinzelelo.
Ityebile kwifayibha, ke ngoko, iyasinceda ukuba silwe ukuqhina.
Inceda ukunciphisa cholesterol egazini. Eziqulatha akukho manqatha kwaye zinceda ukulawula amanqanaba.
Baphucula kwaye bathathe inxaxheba ekwakhiweni kokugaya okuhle, banciphisa i ukuqhina, ithintela igesi kwaye inegalelo ekungafumani ubunzima obukhulu.
Inika iiswekile ezibalulekileyo ezisinika amandla. Iswekile yendalo yile iswekile, i-fructose kunye ne-sucrose.
Zizityebi ngentsimbi, ke ukusetyenziswa kwayo kuyacetyiswa kubo bonke abanayo ianemia, okanye abantu abadala abafuna amandla ongezelelweyo.
Kwelinye icala, ube sisityebi nge potassium kwaye usezantsi kakhulu kwisodiyam, imihla inceda ukulawula inkqubo ye-nervous.
Iingcebiso ngokujongana nemihla
Imihla inobomi obude, nangona oko kungathethi ukuba abahambi kakubi. Kuya kufuneka uyazi ukuba uyigcina kwaye uyigcine kakuhle ukuze ingonakali. Ngesi sizathu, sicebisa ukuba sizigcine kwiingqayi zeglasi ezingangeni moya kunye nezomileyo, kwindawo apho zingavezwa kukukhanya.
Njengoko besesitshilo, umhla usisityebi kwisixa esikhulu sezondlo kunye neeminerali, ezinje ngecalcium, phosphorus, potassium, magnesium kunye iivithamini zeqela B, ipritamin A, C no-D. Ungathandabuzi ukuyazisa kwindlela otya ngayo ukuze ukwazi ukuzuza kubo bonke. Unokutya umndilili we-3 kunye ne-5 imihla ngosuku.
Ukunambitheka kwabo kumnandi, banjalo Ukuhlalisa kwaye zinokutyiwa kukutya okuncinci, nangona kunjalo, akufuneki sizihlukumeze kuba zityebile kwiswekile, nangona Inzuzo inokutshintsha ukulahleka kwesisindo.
Njengoko ubonile, imihla kukutya okumnandi ebesityiwe amawaka eminyaka, esi siqhamo sincinci somthi wesundu sinokufumaneka phantse kuzo zonke iivenkile ezinkulu, iimarike kunye neevenkile zesebeNangona kunjalo, umgangatho wayo uya kwahluka ngokuxhomekeka ekubeni uvela phi.
Khangela ezona mpawu zibalaseleyo kwaye ufumane apho imihla oyithandayo kakhulu ivela khona, ngokuqinisekileyo uya kufumana into oyithandayo kwaye onokwenza ngayo iiresiphi ezimnandi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukutya kukaNutri » Ukutya » Iipropathi zemihla
Ukutya okungafunekiyo kwe-asidi yeUric